October 2013 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Andriod ဖုန်း/ tablet တော်တော်များများ ကို လွယ်လွယ်ကူကူ root နိုင်မယ် Kingo Android root 1.1.0.1
Myanmar IT Sky at 5:31:00 AM 0
Software Full Version Download and Tech News Update
Andriod ဖုန်း/ tablet တော်တော်များများ ကို လွယ်လွယ်ကူကူ root နိုင်မယ် Kingo Android root 1.1.0.1 နောက်ဆုံးထွက်လေးပါ one click root လေးပါ လွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့Samsung, HTC ,LG
Google,Huawei,Sony,Moteroller စသည့် andriod ဖုန်းများကို root နိုင်သလို root ပြီး ဖုန်းများကို
လည်း Unroot လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လိုချင်သူများအောက်မှာ ဒေါင်းသွားပါ။
အောက်မှာ root နိုင်တဲ့ ဖုန်းများ စာရင်းပါ
Draw And Email Pro APK
mmitdeveloper at 7:10:00 PM 0
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီတခါကျနော်ကသူငယ်ချင်းတို့ကိုမေးပို့ရာမှာကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပုံတွေဆွဲပြီးပို့လို့ရမယ့်Appလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရ စေ။သူငယ်ချင်းတို့ကိုယ့်အသိမိတ်ဆွေတွေဆီEmail;Gmailတို့ကိုပို့တဲ့အခါစိတ်ကြိုက် ရုပ်ပြောင် ပုံလေးတွေဆွဲပြီးစလို့ရမယ့်Appလေးပါ။လိုချင် သပဆိုရင် တော့အားနာစရာမလိုဘဲသယ်ဆောင် နိုင် ပါပြီခင် ဂျာ;)
Download အဆင်မပြေရင် ပြောပါ.. အဆင်ပြေအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပေးပါမယ်... အဆင်ပြေရင် ကြော်ငြာလေး တစ်ချက်လောက်တော့ Click ပြီး ဝင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်..
BLOG Blog Lesson Blog Widget
ကိုယ်ပိုင် Blog/site ပိုင်ဆိုင်သူများအတွက် SEA Games ဆီးဂိမ်း သီချင်းPlayer ထည့်လို့ရပြီ
Pyae Phyo at 9:51:00 PM 0
ရွှေမြန်မာတွေအတွက် SEA Games ဆီးဂိမ်း သီချင်းတောင်းဆိုထားတယ်ဆိုလို့ ပြန်လည် သင်တို့ Website/Blog ပေါ်ထည့်ချင်သူများအတွက်ပါ။ သီချင်းကော ၊ ပုံစံ အစစ်အမှန်ကော ၊ Widgets ပါ အောက်ပါအတိုင်း ယူလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
Click here (ဒီမှာ ပုံစံ၊ code ၊ သီချင်းနားထောင်လိုက်ပြီး ရယူလိုက်ပါ)
Queen Of Fire Live Wallpaper
mmitdeveloper at 3:13:00 PM 2
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။Livewallpaperကောင်းကောင်းကြိုက်သူများအတွက် မီးဘုရင် မLivewallpaperလေးကိုတင် ပေးလိုက်ပါတယ်။ညှို့ယူအားကောင်းတဲ့မျက်ဝန်းတစုံကဖန်းစားနေပါတယ်။မီးလျှံကြားမှမိန်းမ ချောလေးLivewallpaperကိုလိုချင် တယ်ဆိုရင် ယူထားလိုက်ကြပါနော်။
mmitdeveloper at 2:07:00 PM 30
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျနော်ဒီနေ့သိပ်စိတ်မ ကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်ဒီနေ့ဆဲံခံလိုက်ရပါတယ်။ကျနော်ဒီက နေ့တင် ပေးတဲ့Wifi Chargerလေးကိုသူသုံးဖူးတယ်။မရဘူးတဲ့။နောက်တခါတင် ပေးရင် သေချာစမ်းကြည့်ပြီးမှတင် ပေးပါတဲ့။ကျနော်ခံရခက်ဆုံးက တော့ကျနော်ဆိုဒ်ကိုစောက် ပေါဆိုပြီးဆဲံလိုက် ရခြင်းကိုပါ။ကျနော့်ပညာကိုစော်ကားတာကိုခံနိုင် ပါတယ်။ကျနော်မြတ်နိုးရတဲ့အရာကိုစော်ကားတာတော့ကျနော်မခံနိုင် တာပါ။ဘယ်လိုအဆင့်တန်းက ပေါက်ဖွားလာတာလဲဆိုတာကျနော်မသိ ပေမဲ့မြန်မာလူမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းမိပါတယ်။သူငယ်ချင်းတို့ကိုသိစေချင် တာကကျနော်ဆိုဒ်ထောင် ရခြင်းမှာဘာမှမတိုးတက်တဲ့ကျနော်တို့နိုင် ငံမှာနည်းပညာလေ့လာသူတွေတပုံကြီးပါ။ကျနော်ကိုယ်တိုင် လဲDeveloperကောင်းတ ယောက်ဖြစ် အောင်ြိုးစားနေသူပါ။ကျနော့်လိုဝါသနာတူသူငယ်ချင်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးချင်ရုံသက် သက်ပါ။မြန်မာနိုင် ငံမှာBloggerလုပ် ရတာတော် တော်ဒုခက္ခခံရပါတယ်။အပင် ပန်းခံပြီးရလာတဲ့ရလဒ်က တော့ကျနော်ကိုလက်ကမ်းကြိုဆိုနေပါပြီ။ဒါပေမယ့်ကျနော်ခံယူချက်က တော့ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျနော်Blogစ ရေးတာ၂လ ကျော်ကျော်လောက်ဘဲရှိသေးတာမို့အမှားပါရင် လဲသည်းခံပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။Developerတ ယောက်ဖြစ် အောင် ကျနော်တို့Future Developers Fmaily(FDF)Groupအဖွဲ့သားတွေလိုကြိုးပန်ူနေကြတဲ့ဝါသနာတူသူငယ်ချင်းတွေကိုလေ့လာရာမှာအ ထောက်အကူဖြစ်ဖို့သီးသန့်ဆိုဒ်လေးထောင် ကာထောက်ပံ့ပေးဖို့လဲစီစဉ်နေ ကြောင်းကိုမြန်မာပြည်ဖွားနည်းပညာသမားများသိအောင် တပါးတဲအသိပေးအပ်လိုက်ရပါတယ်ခင် ဗျာ။
FUTURE DEEVELOPERS FMAILY(FDF)GROUPS
BLOG Blog Widget
SEA Games မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုဆီးဂိမ်းကို သင့် Blog တွင်ထည့်ချင်သူများအတွက်
Pyae Phyo at 11:13:00 AM 2
ဒီတစ်ခါတော့ SEA Games ကိုဂုဏ်ပြုချင်တဲ့သူတွေအတွက် SEA Games ကြိုဆိုရေးအလှံနဲ့ အခြား SEA Games ပုံစံလေးတွေကို ဝေမျှမှာပါ။ သင့် Blog/site မှာလွယ်လွယ်ကူကူတင်လို့ရတာမို့လို့ ယူလိုက်ပါ။ ကျွန်တော် Ning site ကနေ ပြန်လည်ဝေမျှပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ။ SEA Games Gadget ထည့်ခြင်းဖြင့် မြန်မာတွေအတွက် ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ။
>>> SEA Games Gadget များဒီမှာ ရယူပါ <<<
Window8မှာ Picture Password ပေးမယ်
mmitdeveloper at 9:20:00 PM 0
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျနော်လဲComputerဖက်ကိုမလှည့်ဖြစ်တောင် တာကြာသွားပြီ။အခုတော့Win8မှာPicture Passwordပေးမယ့်Simple Trickလေးကိုပြောပြ ချင် ပါတယ်။သိတဲ့သူတော့ကျော်ဖတ်သွားပါဗျာ။
1.Open the Win Charms
2.Click settings and then more PC settings
3.In the PC settings Win Click Users and then select createapicture password
ဒါ့ပြင် ဂဏန်းလေးလုံးပေးပြီးတော့Pin password ကိုလဲဖန်တီးနိုင် ပါသေးတယ်ဗျာ။
Girls Generation Gallery APK
mmitdeveloper at 1:51:00 PM 1
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။Girls Generation ပရိတ်သတ်များအတွက်Girl generation အဖွဲ့Gallery လေးကိုတင် ပေးလိုက်ပါပြီ။ကျနော်က တော့အသည်းစွဲလေ,...ဟီးဟီး,... သူငယ်ချင်းတို့လဲကြိုက် ရင် ယူထားလိုက်ပါဗျာ။အဆင် ပြေရင် လဲCommentလေးတော့ပေးခဲ့ပါဦး:P
mmitdeveloper at 8:44:00 AM 0
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။Wallpapersအလန်းလေးတွေကိုမှကြိုက်ပါတယ်ဆိုသူများအတွကိပါ။ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပြောပြ နေစရာမလိုလောက်တော့ပါဘူးဗျာ:Pအောက်က နေ တောင် ဒေါင်းသွားလိုက်ကြပါဗျာ:P
Phone Monitor APK
mmitdeveloper at 4:14:00 PM 0
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီက နေ့ဘဲဖုန်းတွေတွက်ကွန်ပျူတာလိုMonitor Softwareလေးထွက်လာပါပြီ။ထွက်ထွက်ချင်းသူငယ်ချင်းတို့ဦးဦးဖျားဖျားသုံးရ အောင် ကျနော်တင် ပေးလိုက်ပါပြီ။လိုချင်ရင် တော့ဒီမှာဒေါင်းလိုက်ကြပါဦးဗျာ။
ဘာ ဆော့ဖ်ဝဲမှ မသုံးပဲကွန်ပျူတာအဖွင့်အပိတ်ကိုကိုယ်ကြိုက်တဲ့အသံထည့်မယ် ( for XP )
Myanmar IT Sky at 11:50:00 AM 2
အရင်တစ်ခါက Window ဖွင့်/ပိတ် အသံကိုကြိုက်တဲ့အသံထည့်တဲ့
အသုံးပြုပြီးပြုလုပ်နည်းလေးပါ .. ဒီတစ်ခါမိတ်ဆွေများအတွက်
ဘာဆော့ဖ်ဝဲမှမသုံးပဲ Window XP ရဲ့ အဖွင့် / အပိတ် အသံတွေကို
မိမိ ကြိုက်တဲ့အသံ (ဒါမှမဟုတ်) သီချင်းသံလေးတွေထည့်တဲ့နည်း
လေးကိုဖော်ပြပေးသွားပါမယ်ဗျာ.. ကျွန်တော်လဲ Window XP မှာပဲ
လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုတွေ့ထားလို့ပါ.. Window7နဲ့ Window 8
မှာတော့ မကလိရသေးလို့မသိသေးပါဘူးနော်.. ဒီနည်းလေးအတိုင်း
မလုပ်ခင်သတိပေးစရာလေးတော့ရှိတယ်နော်. အဲဒါကတော့ မိမိပြုလုပ်
မယ့် အသံ (ဒါမှမဟုတ်) သီချင်း တွေကို Wave ဖိုင်အမျိုးအစားဖြစ်အောင်
့အရင် Format ပြောင်းထားရပါမယ်. ကျန်တဲ့ ဘာ ဖိုင်အမျိုးအစားမှမရပါ
ဘူး.. Wave ဖိုင်ပဲရတာပါ.. Wave ဖိုင်သာပြောင်းထားကြပါဗျာ.. Wave
ဖိုင်ပြောင်းနည်းကိုတော့မပြောပြတော့ဘူးနော်.. ကဲ..စလိုက်ကြရအောင်ဗျာ ..
၁။ အရင်ဆုံး မိမိကွန်ပျူတာရဲ့ window start ဘားကို click ပြီး
Control Panel ကိုအရင် Click လိုက်ပါ.. ပုံ (၁)အတိုင်းပါ။
၂။ အဲဒီအခါကျရင် Control Panel Box ကျလာပါလိမ့်မယ်... အဲဒီ
Box ထဲမှာ Sound and Audio Device ဆိုတာကိုရှာပြီး double click လိုက်ပါ။
ပုံ (၂) နှင့် (၃) အတိုင်းပါ။
ပုံ (၂) နှင့် (၃)
၃။ အဲဒီအခါ Sound and Audio Device Properties ဆိုတဲ့ Box
ကျလာပါလိမ့်မယ်. ပုံ (၄)အတိုင်းပါ။
၄။ အဲဒီ Sound and Audio Device Properties Box မှ Sound ဆိုတဲ့
Tab ကို Click လိုက်ပါ။ ပုံ (၅)အတိုင်းပါ။
၅။ Sound Tab ရဲ့အောက်မှာ Program events ဆိုတဲ့ လေးထောင့်
ကွက်ကြီးထဲက Start Windows ဆိုတာကိုရှာပြီး select ပေးလိုက်ပါ။ အဲဒီလို
Select ပေးပြီးရင်သူ့ရဲ့အောက်မှ Browse ဆိုတဲ့လေးထောင့်ကွက်လေးကိုတွေ့
မှာပါနော်. အဲဒီ Button လေးကို Click လိုက်ပါ။ ပုံ (၆)အတိုင်းပါ။
အဲဒီအခါ Open Box တစ်ခု ကျလာပါလိမ့်မယ်.. အဲဒီ Box ထဲမှာ မိမိအရင်ဦးဆုံး
ပြောင်းထားတဲ့ မိမိပြောင်းလိုတဲ့ အသံဖိုင် (ဒါမှမဟုတ်) သီချင်းဖိုင် ရှိရာကို
သွားလိုက်ပါ.. ပြီးရင် Openကို Click ပြီး စက်ကို Restart ချလိုက်ပါ.. window
အဲ.. Window Shut down သံကိုတော့ကိုယ့်ဖာသာကိုပြောင်းနိုင်မယ်ထင်ပါ
တယ်. ပုံ (၆) ထဲက Start Windows ဆိုတဲ့နေရာမှာ Window Shut down
ဆိုတာကိုလိုက်ရှာပြီး အဲဒီနည်းအတိုင်းသာလုပ်လိုက်ပါ.. အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်..
အထက်ကနည်းကတော့ Window XP အတွက်ပါနော်.. Window7/ 8 တွေ
အတွက်တော့ကျွန်တော် မကလိရသေးလို့ပါ.. window7မှာတော့ ကျွန်တော်
ကျန်တာတော့ကျွန်တော်ထပ်ပီး ကလိလိုက်ဦးမယ်နော်.. ပီးရင်တင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဗျာ..
သိတဲ့သူရှိရင်လဲ Comment မှာစာလေးရေးပြီးချန်ခဲ့ပါဗျာ. ကျွန်တော် ပို့စ်
အဖြစ်ပြန်ပြီး Share ပေးပါမယ်နော်..
GPSlocation Share APK
mmitdeveloper at 9:01:00 AM 0
သူငယ်​ချင်း အားလုံ့းမင်္ဂလာပါ။ သူငယ်​ချင်းတို့
ဘယ်​​နေရာ၊ ဘယ်​​ဒေသ ​ရောက်​​နေလဲဆိုတာ ​ပြောပြလို့ရမယ့်​ App​လေးနဲ့ မိတ်​ဆက်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။ ပို့​ပေးမယ့်​သူမှာ​တော့​ဆော့ဝဲ နဲ့အင်​တာနက်​
ရှိရ ပါ့မယ်​။ SMSs text message OR Email OR Gmail တို့နဲ့ပို့​ပေးရမှာပါ။ လက်​ခံမယ့်​သူက​တော့ဘာမှမလိုပါဘူး ။Google က​နေကလိမ်​ကကျစ်​ကျပြီး
​တောင်းလာတာ​လေ။ Google ကလဲ ငတိက​ပေတီး​ပေစုတ်​နဲ့ ဆင်းရဲသားမှတ်​ပြီး​ပေးလိုက်​တာထင်​ပါတယ်​...ခိခိ...။
mmitdeveloper at 2:24:00 PM 0
သူငယ်​ချင်းအား လုံးမင်္ဂလာပါ။ Superuser Update ကိုတင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။ိးဒီ​ကောင်​လးကတခြား.​Superuser ​တွေနဲ့မတူပါဘူး ။ အသုံးပြု
ရတာလယ်​ကူပါတယ်​။ တချို့ Superuser ​တွေကတရုတ်​စာ​တွေနဲ့ဆို​တော့ အခက်​​တွေ့ရတာ​ပေါ့ိးဒီ​ကောင်​​လေးကတာ့ ​ Eng ဆို​တော့ဖတ်​ရတာ
လွယ်​ကူတာ​ပေါ့ဗျာ။ Superuser ဆိုတာဘာလဲလို့ လာမ​မေးနဲ့​နော်​ ဖုန်းသုံးတဲ့သူတိုင်း သ်ိကြမှာပါ။
Virtually Increase RAM Performance
mmitdeveloper at 4:06:00 PM 0
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။နေက်ကွယ်က နေRunနေတဲ့Appsတွေကကျနော်တို့ရဲ့Primary memory
ဘူး။ဒီထက်နဲရင် တော့ပြဿာနာWin & RAM speedတွေဟာနှေးလာပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုအောက်ကအဆင့်
လိုလုပ်ဆောင် နိုင် ပါတယ်။
Right click on my computer on destop
>>Go to properties
>>Go to Advanced
>>Go to Performance Setting
>>Go to Virtual memory-change
Win speed က​တော့အမှန်​ကန်ိတုးလာပါတယ်​။ကျ​နော်​ကလဲစာ​ရေး ရင်​ ​လေးလုံးကွဲ​အောင်​မ​ရေးတက်​လို့. အမှားပါရင်​လဲခွင့်​လွတ်​​ပေးကြပါ​နော်​။
Here you can play some high end games which require RAM
Color Note APK
mmitdeveloper at 3:42:00 PM 0
သူငယ်​ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ သူငယ်​ချင်း တို့ကအလုပ်​များလို့ မှတ်​စု စာအုပ်​. ​လေး​တွေသုံးရ တယ်​ဆိုရင်​ကျ​နော်​က သူငယ်​ချင်းတို့
အတွက်​ချစ်​စရာ ​ရောင်​စုံကာလာနုတ်​​လေးကိုတင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။​ရောင်​စုံကာလာ​လေးဆို​တော့ချစ်​စရာ ​ကောင်း​ပေါ့ဗျာ။
အ​ရောင်​​တွေကိုလဲစိ်​​​တ်​ကြိုက်​ ​ပြောုင်းလဲနိုင်​ပါတယ်​။ အမယ်​... သူ​လေးကCalendar ​လေး​တောင်​ပါ​သေးသဗျ။
Maverick Map APK
mmitdeveloper at 8:28:00 PM 0
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။မြေပုံအသုံးပြုချင်တဲ့သူများအတွက် မြေပုံလဲသုံးလို့ရသံလိုက်အိမ်မြောင် အဖြစ်လဲသုံးလို့ရပါတယ်။ကျနော်က တော့မြေပုံကိုကောင်းကောင်းမသုံးတက်လို့ဒီလောက်ဘဲရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။အဲအဲ....ကွန်းမန့်ကိုတော့ဒီထက် လက်ခံနိုင် ပါတယ်။
SuperSpyCamera Pro APK
mmitdeveloper at 7:46:00 PM 1
ကင် မရာတွေကိုဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးပြေင်းသုံးချင် သူများ......:)
Tarot Baydin APK
mmitdeveloper at 3:57:00 PM 0
ပေးလိုက်ပါပြီ။ကျနော်က တော့နားမလည်ပါဘူး။ရာသီဖွားမေးရတာထင် ပါတယ်။ဗေဒင် ၀ါသနာပါရင်တော့ဗျာယူ
Windows 8 Activator RemoveWat With Crack ( for PC )
Myanmar IT Sky at 3:29:00 AM 0
Window 8 အသုံးပြုတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက် Windows 8 Activator RemoveWat
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ.. ဖိုင်ဆိုက်ကလဲနည်းနည်းလေးဆိုတော့ စက်အတွက်
သက်သာပါတယ်. PC မိတ်ဆွေများအတွက်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ကောင်လေးပါ..
* Support Windows 8 Enterprise (x86_x64) Bit OS
* Support Windows 8 Professioanl (x86_x64) Bit OS
* Windows 8 Release Preview Watermark Remover.
* Windows 8 Consumer Preview Watermark Remover
* Windows 8 KMS Activator
* Windows 8 Professional Keys
* Windows 8 Ultimate Keys
* Unlock Personalization
* Change Profile Pictures, WallPaper, StartScreen
* Windows 8 Activation Reset
* Rearm Windows
mmitdeveloper at 9:54:00 PM 3
အင်တာနက်သုံးရာတွင် ဖုန်းဘေဖြတ်တောက်မူများရှိနေ ပြီးSettingပြန်လည်ပြင် ဆင်၍အသုံးပြုရန်လိုကြောင်း
ထိုသို့ငွေဖြည့်ကတ်နှင့်ပတ်သက်၍GSM/WCDMAဖုန်းများအတွက် ဖုန်းနံပါတ်၀၁-၅၅၅၄၇၆ နှင့်CDMA450/
CDMA800Wallဖုန်းများအတွက် ဖုန်းနံပါတ်၀၁-၂၁၇၂၁၉ နှင့်CDMA800(Mec Tel)ဖုန်းများအတွက်
Window 8 StartButton ( for PC )
Myanmar IT Sky at 4:52:00 PM 0
Window8 အသုံးပြုတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက် StartButton အသစ်လေး
PhotoCube Livewallpaper APK
mmitdeveloper at 10:53:00 PM 2
သူငယ်ချင်းအားလုံးခင် ဗျာဒီက နေ့ဘဲကျနော့်အချစ်တော်လဲများကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာလို့ချက်ချင်
ဖိုင် တွေUploadတင် ပြီးတင် ပေးလိုက်တာက တော့Livewallpaperလေးပါ။Cubeပုံစံလေးထောင့်ကွက်လေးထဲ
mmitdeveloper at 9:51:00 PM 7
သူငယ်ချုးအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီပို့စ်လေးက တော့ကျနော်developerကသူငယ်ချင်းတို့ကိုတောင်းပန်တဲ့ပို့စ် လေးပါ။ကျနော့်အတွက်တော့၂၀၁၃၊Octလဟာကံမ ကောင်းတဲ့လဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျနော့်အချစ်တော်လေးများဖြစ်ကြတဲ့Computer and Tabletလေးတွေတပြိုင်ထဲစက်ဖောက်သွားလို့ကျနော်ပို့တွေမတင် ပေးနိုင်.ခဲ့တာပါ။တော်ရုံနဲ့ပြန်ကောင်းမှာမဟုတ်ပါ။ဒါ့ကြောင့်ကျနော်ကသူငယ်ချင်းတို့ကိုတောင်းပန်ရတာပါ။သူငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့www.mmitdeveloper.orgလေးကိုမုန်းသွားမည်ကိုလဲစိုးရိမ်နေရပါတယ်။ကျနော့်ဆိုဒ်ကိုဝင် ရောက်လာတဲ့သူများကိုလဲပို့အ ဟောင်းများနဲ့တွေ့ကြုံစေရတာစိတ်မ ကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ခုပို့လေးတောင် အကို့Tabletလေးနဲ့တင် ပေးလိုက်တာပါ။ကျနော့်အခက်ခဲကိုနားလည်ပေးကြဖို့နှင့်www.mmitdeveloper.orgလေးကိုမုန်းမသွားဖို့ကျနော်ကအနူးညွတ် အနူးညွတ် အနူးညွတ် ကိုတောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင် ဗျာ။
Laptop နဲ့ Smart Phone တွေရဲ့ဘက်ထရီအတွက်သိသင့်တဲ့အချက်များ
Myanmar IT Sky at 4:55:00 PM 0
Laptop ဘက်ထရီအစားသက်သာမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲတောင်းထားတဲ့အကိုရေ အခုအချိန်ထိ
အဲဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုကျွန်တော်ရှာမတွေ့သေးပါဘူးခင်ဗျာ.. ကျွန်တော်က Blogger အသစ်
ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကပဲညံ့လိုနေမှာပါဗျာ.. တွေ့ရင် တွေ့တဲ့အချိန်တင်ပေးလိုက်ပါ
မယ်ခင်ဗျာ.. အခုတော့ ကျွန်တော် Laptop ကျွန်ပျူတာက ဘက်ထရီကိုချွေတာတဲ့နည်း
လေးကိုကျွန်တော်သိသမျှလေးနဲ့အကြံပြုပေးပါရစေနော်.. ကျွန်တော်လဲ Laptop နဲ့ပဲ
သုံးနေတာမို့ မီးပျက်သွားတဲ့အခါမှာ ဒီနည်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးသုံးနေပါတယ်..
ကျွန်တော်တို့ကျွန်ပျူတာသုံးနေစဉ်မှာမီးပျက်သွားလို့ ဘက်ထရီ (ခေါ်) အားသွင်းဓါတ်ခဲ
ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ Laptop မှာ Power အစားသက်သာစေမဲ့နည်းလမ်းလေးကိုအသုံးပြု
ရမှာပါ... မိမိကွန်ပျူတာမှာ Power တွေကိုဘယ်အရာက Share ပြီးသုံးနေရတာလဲ
1 >> ကွန်ပျူတာက Monitor ဖြစ်တဲ့ LCD ပဲဖြစ်ဖြစ် LED ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့. ကျွန်တော့ Laptop
ကတော့ LCD ပါ.. အဲဒါကို Bright အရောင်တွေကိုလျှော့ချရပါလိမ့်မယ်.. လျှော့ရမယ့်
နည်းလေးကတော့သိမှာပါနော်... ကွန်ပျူတာ Keyboad မှာပါပါတယ်ဗျာ.
2>> ကွန်ပျူတာနဲ့တွဲပြီးသုံးတဲ့ Mouse / Keyboad / Cooler Fan စတာတွေကို
ဖြုတ်ပစ်ရပါမယ်..အဲဒါတွေမှာလဲသူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ Power တွေပေးထား
ရလို့ပါ... အဲ ..သီချင်းဖွင့်ပြီးနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် . Movie ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်
3>> မလိုအပ်ပဲ Run နေတဲ့ Program တွေကိုလဲပိတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျာ... စက်ကိုလေးစေ
သလို Power ကိုလဲသုံးစွဲလို့ပါ.. အဲဒါတွေကိုပိတ်ဖို့တော့သိမှာပါနော်..
Start Tesk Manager ထဲက Porcesses ဆိုတဲ့ Tab မှာသွားပြီးရှာရပါလိမ့်မယ်..
တွေ့ရင် Select ပေး Click ပြီး End Process ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ... မတော်လို့များ
ကိုပိတ်လိုက်တဲ့ကောင်က Window တစ်ခုလုံးကို Run စေတဲ့ Program ဆိုရင်တော့
Window ကိုပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ရပါလိမ့်မယ်.. အဲဒါတော့ ဘယ်ဟာ Window Program
ကဲ.. အကိုတို့ရေ အထက်ကအချက်တွေအတိုင်းသာလုပ်သွားမယ်ဆိုရင် ဘက်ထရီဟာအရင်က
(၃၀)မိနစ်သာခံမယ်ဆိုရင် အခု (၄၅ / ၆၀) မိနစ်တော့ခံပါလိမ့်မယ်ဗျာ. ကျွန်တော်လဲအဲဒီအတိုင်း
အကိုတို့ရေ အဓိကကျွန်တော်မှာချင်တာကတော့ အဲဒီ Laptop တို့ Phone တို့မှာ
သုံးတဲ့ဘက်ထရီဆိုတာ Cell တစ်မျိုးပါဗျာ. အဲဒါတွေက Recharge ဓါတ်ခဲလို့လဲခေါ်ပါတယ်..
အကိုတို့လဲသိမှာပါ.. အဲဒါတွေကိုသုံးတော့မယ်ဆို တော်တော်လေးဂရုစိုက်ရပါတယ်..
ကျွန်တော်လဲ အစကလုံးဝမသိပါဘူး. Electronic အခြေခံသင်တန်းတက်လိုက်တော့မှ ဆရာ
ကျွန်တော်တို့ Recharge ဓါတ်ခဲတွေကိုအားသွင်းတဲ့အခါမှာဂရုစိုက်ရပါမယ်. ဘာကို လဲဆိုတော့ အားသွင်းလို့ပြည့်သွားပီဆိုရင်ပိုမသွင်းမိဖို့ပါ..တနည်းပြောရရင် OVER Charge ပေါ့.. အဲဒီလို OVER Charge ဖြစ်ပီဆိုရင်ဘက်ထရီမှာပြုလုပ်ထားတဲ့အထဲထဲက Cell လေးတွေက ပျက်ဆီးတတ်ပါတယ်.. အဲဒီလိုပျက်ဆီးတဲ့အခါမှာ ဓါတ်ခဲဟာအားအပြည့်ကြီးသွင်းထားပေမယ့် တာရှည်မခံတော့ဘူး.ခဏလေး သုံးလိုက်တာနဲ့အားကချက်ခြင်းသိသိသာသာရာခိုင်နှုန်းကျ ဆင်းပြီးအားကုန်သွားတတ်ပါတယ်.. ကြုံဖူးရင်လဲကြုံဖူးကြမှာပါ.. အဲဒီဓါတ်ခဲတွေကိုအားသွင်းရင် အားပြည့်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ ဆိုတာ တွက်လို့ရပါတယ်. အဲဒါကိုလဲ ဓါတ်ခဲတွေ့မှာ ရေးထည့်ထားပါတယ်..ဖုန်းတွေရဲ့ဓါတ်ခဲတွေမှာ လဲပါပါတယ်.. တချို့နားလည်တဲ့သူတွေ.. ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေဆိုရင်မိမိဓါတ်ခဲ(ခေါ်)ဘက်ထရီမှာ အား ဘယ်လောက်ကျန်လဲ.. အားသွင်းလိုက်ရင်ဘယ်နမိနစ်စောင့်ရမလဲဆိုတာကိုတွက်ပြီးအားသွင်းထားခဲ့ပြီး ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာလုပ်ပြီးမှပြန်လာ လို့ရပါတယ်.. အဲဒါကတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ဗျာ. ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ အဲဒီလောက်မလိုပါဘူး..အဓိကကတော့မိမိဓါတ်ခဲအားသွင်းထားလို့ပြည့်ပြီ ဆိုရင်ချက်ခြင်းအား သွင်းထားတာကနေဖြုတ်လိုက်ရင်ရပါတယ်.. အဲဒါကတော့ဓါတ်ခဲနဲ့ပတ်သတ်လို့ အားသွင်းရင် ဂရုစိုက်ရမယ့်ဟာလေးပါ..
နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့ မိမိဓါတ်ခဲ(သို့)ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အားအကုန် မသုံးမိဖို့လိုပါမယ်.. အဲဒါကတော့ကျွန်တော့်ကိုယ်တွေ့နော်.. မယုံမရှိနဲ့ဂျ.... ဟဲ ..ကျွန်တော်လဲ တစ်ခါ ခံရပီးပီ.. အဲဒီဓါတ်ခဲတွေမှာ ခံ ဗို့နဲ့ စံ ဗို့ဆိုပြီးရှိပါတယ်.. ကြားလဲကြားဖူးကြ မှာပါနော်.. ခံဗို့ဆိုတာ ကတော့ နောက်ဆုံးထားရမယ့် ဗို့အားကိုပြောတာပါ.. စံဗို့ဆိုတာကတော့ဘယ်လောက်ထိသုံးလို့ရတယ် ဆိုတဲ့သဘောပါ.. အဓိကလိုက်နာရမှာကတော့ ခံဗို့ ကိုအကုန် မသုံးကြပါနဲ့ဗျာ.. ခံဗို့ဆိုတာကလွယ်လွယ် ပြောရင် မြင်သာမဲ့ဟာနဲ့ဥပမာပြရရင် ဖုန်းမှာဓါတ်ခဲအားကုန်ခံနီးဆိုဓါတ်ခဲပုံလေးကအရောင်ပြောင်းသွား ပါတယ်.. တချို့ကအနီရောင် ၊ တချို့ကအ၀ါရောင်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်.အဲဒါလိုဖြစ်ပီဆိုရင်သေချာတယ်.. ဖုန်းကိုဆက်မသုံးတာ အကောင်းဆုံးပါ..သေရေးရှင်ရေးအရေးကြီးမှသာသုံးသင့်ပါတယ်ဗျာ..ဓါတ်ခဲကို ကုန်တဲ့ အထိ (၃/၄)ခါလောက်သုံးကြည့်လိုက်ပါ..အဲဒီဘက်ထရီ (သို့ )ဓါတ်ခဲသေချာတယ်ပျက်ပါပြီ.. မယုံ
ကဲ..ဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပီလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.. အခုအပေါ်မှာပြောပြတဲ့ နည်းလမ်းတွေက Laptop ကွန်ပျူတာအတွက်ရော၊ တစ်ခါတည်း ဖုန်းတွေအတွက်ပါပြောပြ ပေးထားတာပါဗျာ..ကျွန်တော်လဲ ပညာရှင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာ. ဒါပေမယ့် ကိုယ်သိသလောက် လေးပြန်ပြီး Share လိုက်တာပါ..တကယ်လို့ အထက်ကနည်းတွေထဲမှာလိုအပ်တာလေးတွေ ရှိခဲ့လို့သိတဲ့သူရှိရင်လဲနည်းလမ်းလေးကိုအများသူတွေ သိဖို့ Comment မှာရေးပြီးပြောပြပေး စေလိုပါတယ်နော်.. ဘက်ထရီအားကုန်သက်သာစေမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကို တောင်းထားတဲ့အကိုအတွက် လဲကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်ရှာပေးပြီးတင်ပေးပါမယ်ဗျာ..ကျွန်တော် မတွေ့လဲ ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေတွေကိုအကူအညီတောင်းပီးရှာပေးပါမယ်ဗျာ.. အခုလောလောဆယ်တော့ အထက် ကနည်းလေးနဲ့ပဲကြေနပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ.. အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ..
Myanmar IT Sky at 2:17:00 AM 4
Bluetooth Share Menia Pro ( for iOS )
Myanmar IT Sky at 6:55:00 PM 0
Apple Device ကိုင်ဆောင်ကြသော မိတ်ဆွေများအတွက်
Bluetooth Share Menia Pro Application နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်၊
Music, Photo, Video, Bluetool Chat စတာတွေကို Share ပြုလုပ်လို့
ရပါတယ်ဗျ...Apple Store မှာတော့ $4.99 နဲ့ပေးဝယ်ရမှာဖြစ်ပြီး
mmitsky မှာတော့ Free သာယူလိုက်ပါဗျာ..
credit >> zealot-mko
mmitdeveloper at 3:25:00 PM 4
ဆိုလို့ကျနော်လဲမရှိတာနဲ့ဖုန်းထဲကရ အောင်ဖျောက်နည်းလေးကိုအားလုံးသိရ အောင်ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံးSettingထဲဝင် ပါ။ရောက်တာနဲ့Account and syncထဲဝင် ပါ။အောက်ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် ၀ိုင်းပြထားတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုကိုယ့်ဖုန်းထဲရှိသမျှအ ကောက်တွေအ တွေကျလာပါလိမ့်မယ်။Email
iTag Music APK
mmitdeveloper at 2:41:00 PM 0
သူငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျနော်တို့တွေသီချင်းနားထောင် တဲ့အခါကိုကြိုက်တဲ့သီချင်းလိုက် ရှာရတာအင်
တန်အလုပ် ရှုပ်စေပါတယ်။အခုiTagApkလေးကသီချင်းအစစလုံးရိုက်ထည့်လိုက် ရုံနဲ့တူညီတဲ့သီချင်းများကျ
ဆင်ပြေကြပါလိမ့်မယ်။အဆင် ပြေရင် လဲကွန်းမန့်လေးတော့မ မေ့နဲ့ပေါ့ဗျာ။
KgLay BayDin APK
mmitdeveloper at 2:23:00 PM 0
Smart Lock APK
mmitdeveloper at 12:51:00 AM 0
ကိုအ သေးစိတ်လော့ချထားန်ိင် ပါတယ်။Smartဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ့်ကိုစနစ်တကျနဲ့လော့ချထားနိုင် ပါတယ်။
Functionsတွေတော်တော်များလို့မရှင်းပြနို်င် ပါခဗျာ။ဒေါင်းပြီးမှဘဲကောင်းကောင်းကလိကြ ပေ တော့ခင် ဗျာ။
mmitdeveloper at 12:30:00 AM 0
သူငယ်ချင်းအားလုံးမ တွေ့တာကြာပြီနော်။နေ ကောင်းတယ်မို့လား။ကျနော်ပျောက်နေရခြင်းကိုပြီးတော့မှဘဲရှင်းပြ
ပါမယ်။အခုတော့ကင် မရာချစ်တဲ့ကိုကိုမမတို့အတွက်FX Cameraလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အသုံးပြုပုံကိုမ
ရှင်းပြ တော့ပါဘူး။အောက်မှာလဲScreenshotရိုက်ပြထားပါတယ်။အသစ်စမ်းတွေမှသ ဘောကြတဲ့သူများအ
ပျောက်နေတဲ့ Data တွေကို ပြန်ဖေါ်မယ်
အိုင်တီသားလေး at 9:07:00 PM 2
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ မိမိတို့ကွန်ပျူတာ ရဲ့ Partition C:, D: ၊ Flash drive တွေမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Data တွေ ပျောက်နေရင် ဖြေရှင်းနည်းလေးကို ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဖြစ်အများဆုံးကတော့ virus တွေဝင်ပြီး virus တွေက Data တွေကိုဖျောက်ထားလိုက်တာပါ။ အောက်က ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီ့ထဲမှာ Driver Letter လေးတွေအလိုက် 10 ခုပါပါတယ်။ Data တွေပျောက်နေတဲ့ Flash Drive ကိုကွန်ပျူတာမှာ တပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အဲဒီ့ Driver Letter ကို မှတ်ထားပါ။ ဥပမာ...Removable Disk I , G, K.... Removable Disk I ဆို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်ထဲက I ဆိုတဲ့ ကောင်လေးကို Double click ပေးလိုက်ပါ။ ကျန်တဲ့ Drive Letter တွေဆိုရင်လည်း အစရှိသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ Drive Letter အလိုက် Double click ပေးလိုက်ပါ။ ပျောက်နေသော Data တွေပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
အသစ်တင်တိုင်း Facebook ကနေဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်
ဒီနေရာမှာ Like ပေးခဲ့ပါခင်ဗျာ...
တိုက်ခိုက်ပြီး ပိုက်ဆံတွေလိုက်စားရတဲ့ Game : Run & Gun version 1.5.2 Apk
Aung Ko Htet at 4:22:00 PM 0
ဒီ game လေးက အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသား ကစားနည်းပုံစံအတိုင်ပါပဲ။ Angry Grand game နဲ့စကားပုံခြင်းတူပါတယ်။ ရန်သူတွေတိုက်ခိုက် ပြီးရင် ပိုက်ဆံတွေကိုလိုက်စားရတာပါ။ ကစားပုံကတော့ရိုးရှင်းလွန်းတော့ သိပ်မရှင်းပြတော့ပါဘူး။ ဒီ game လေးကို ကစားချင်ရင်တော့ android version 2.3.3 နဲ့အထက်မှာဆိုရင် ကစားနိုင်ပါတယ်။
အောက်က link တွေကနေ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Aung Ko Htet
mmitdeveloper at 3:54:00 PM 0
ဖုန်းထဲမှာမီးမွှေးမယ့်Virtual Match APKလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဖုန်းထဲမှာမီးမွှေးမှာဆိုပြီးဖုန်းမီး
လောင် သွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုယ့်လက်ကိုမီးခြစ်လိုသဘောထားပြီးမွှေးရမှာပါ။အပျင်းပြေ မွှေးချင် ရင်တော့
mmitdeveloper at 3:32:00 PM 0
မယ်။အခုတော့ဂေါက်ဝာသနာပါသူများတွက်ဂေါက် ရိုက်ဂိမ်းလေးတင် ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီဂိမ်းထူးခြားချက်က
တော့ဂေါက်ကွင်းထဲမှာရိုက် ရိုက် ရတာမဟုတ်ပါ။ကစားကွင်းထဲမှာပတ်ပြီးရိုက် ရတာပါ။ကစားကွင်းထဲလာကစား
ဂေါက်သီးသမားတွေ...အဲလေ....ဂေါက် ရိုက်သမားတွေအတွက်တင် ပေးလိုက်ပါပြီ။
Monday, October 7, 2013 Windows 8.1 ရဲ့ Power Menu မှာ Hibernate ထည့်ရအောင်
Myanmar IT Sky at 2:38:00 AM 0
Window တစ်ခုမှာ Hibenate ဆိုတာရှိသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်..
Window 8 ရဲ့ Hibenate လေးထည့်ပုံထည့်နည်းလေးကိုပြန်လည် မျှဝေ
လိုက်ပါတယ်ဗျာ.. Window 8 အသုံးပြုတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်
Windows 8.1 ရဲ့ Power Menu မှာ Hibernate ပါမလာဘူးဗျာ။
Hibernate ကလည်း အသုံးတည့်တယ်မဟုတ်လား။Microsoft .NET Framework 3.5 လိုပေါ့ ။ Microsoft ကလည်း
အသုံးပြုသူ အဆင်ပြေ အောင်တစ်ခါထဲ ထည့်မပေးဘူးဗျာ။
ဘာသဘောလဲ မသိဘူး ။ ကြုံရင်မေးကြည့်ကျပါဦး..
ဒီတော့ကျနော်က Windows 8.1 ရဲ့ Power Menu မှာ Hibernate ကိုဒီလိုထည့်လိုက်တယ်..
၁။ Control Panel >> Hardware and Sound >> Power Options
Choose what the power buttons do ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
၂။ Change settings that are curently unavailable ကိုနှိပ်ပါ။
၃။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ဘေးနားကမြှားလေးကို
Hibernate နေရာမှာ အမှန်လေးခြစ်ခဲ့ပြီးတော့ Save changes
ကိုလွမ်းဦးမောင်ကို Credit ပေးပါတယ်ဗျာ..
Window Media Player ကိုပုံစံလန်းလန်းလေးတွေပြောင်းမယ်
TaikkyiThar at 6:08:00 PM 0
ကျနော်တို Window Media Player ကို ပုံစံလန်းလန်းတွေသုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက် Skin လန်းလန်းလေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။လောလောဆယ်တော့ သုံးခုတင်ထားပေးပါတယ်။Skin ချိန်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့
အပေါ်ကပုံ အတိုင်းမိမိတိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Skin ကိုချိန်းလိုရပါတယ်။
Share By Taikkyi Thar
SEA Games မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုဆီးဂိမ်းကို သင့်...
ဘာ ဆော့ဖ်ဝဲမှ မသုံးပဲကွန်ပျူတာအဖွင့်အပိတ်ကိုကိုယ်ြ...
Laptop နဲ့ Smart Phone တွေရဲ့ဘက်ထရီအတွက်သိသင့်တဲ့...
တိုက်ခိုက်ပြီး ပိုက်ဆံတွေလိုက်စားရတဲ့ Game : Run &...
Monday, October 7, 2013 Windows 8.1 ရဲ့ Power Menu...
ကွန်ပျူတာကို Android စတိုင်လ် Lock ချမယ်
PES 2014 နှင့် “d3dx9_43.dll” ပြဿနာဖြေရှင်းပုံ
Windows7မှာ Software မသုံးဘဲ Partition ခွဲထုတ်နည်း
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Skype version 6.9.0.106
Smart Google Apps Installer(4.0.3 မှ 4.2.2 ထိ Goog...
RJ 45 Network ခေါင်းညှပ်နည်း
iPhone 5S တွင်ပါဝင်သောအချက်များ
CMD Box ကို စာသား အရောင်လေးနဲ့ နောက်ခံအရောင်လေးနဲ့...
DU Speed Booster & Cleaner apk v 1.1.5